Of ugu wanaagsan ee farxad of QGIS 3.X - Geofumadas
Abriil, 2019 tabo cusub, qgis
Waxaa xiiso leh sida waxqabadyada furan ee Open source ay u suurtagashay in ay isku kalsoonaadaan oo ay fursado ganacsi u fidiyaan kuwa leh qiimo dheeraad ah oo wax ku biirin ah; iyada oo u oggolaanaysa daminta asaasiga ganacsiga isagoo og in shuruudaha ay daboolayaan khabiiro kale oo khaas ah. Waxaan jeclahay WordPress, PostgreSQL iyo QGIS ka mid ah moodooyinkaas.
Waxay ka fog tahay boostada ugu horeysay ee aan ka sameynay Quantum GIS 1.02 ee 2009 iyo gudaha Saameynta QGIS 3 ee 2016. Ku dhajinta dhammaan wixii loo baahnaa waxay muujisay mas'uuliyadda qayb ka mid ah kafaalad-qaadayaasha, ballanqaadka qaybta bulshada ee horumarka, laakiin ka sarraysa aqbalaadda qaybta ka mid ah dadka isticmaala in ka badan inta ay sugayaan inay fahmaan fahamka; taas oo ka sii dareysa booska Taliban ee ka soo horjeeda qorshaha gaarka ah, waxay xooga saartay kartida tartanka ee QGIS. Qodobkani, aragtidayada, waxaan soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah sheekooyinka iyo farsamooyinka isbeddelada ugu dambeeyay ugu yaraan ilaa wixii la soo bandhigay ka dib jumladahan, taas oo aan ognahay inayan noqon doonin ugu dambeyn.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno soo saarista QGIS 3.6 'Noosa'! Noosa wuxuu ahaa meesha ururinta degaanka ee horumarinta Australiyaanka ee dayrta 2017. "Qgis Blog
Laga soo bilaabo version 2.8 Las Palmas, aragtida interface ayaa la hagaajiyay, iyada oo naqshadaynta ugu cusbooneysiiynsan ee badhxaadka tallaabooyinka iyo menuska muhiimka ah. Ugu dambeyntii, 3.6 Noosa, waxaad sii wadi kartaa inaad ku habeysid, adoo la qabsanaya xogta user iyo shuruudaha muuqaalka ah. Waxaan ka soo bixi karnaa aragtida caadiga ah ee aragtida habeenkii, ka caawinta kuwa isticmaalaya saacado badan oo sameynaya habab kala duwan.
Qgis 3.4, waxaad ku gashaa liiska dheeraadka ah, waxaa jira xulasho Ku dhaji QSS - Mawduucyada UI, mashiinka raadinta, iyo ka dib markii la rakibo, ee ku qoran liiska dheeraadka ah, waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarka Ku dhaji mawduuca UI. Laga soo bilaabo daaqada soo dhalatay waxaad kala dooran kartaa dhammaan xulashooyinka haddi ay haboontahay.
Wixii 3.6 version, Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habaynta Habeenka Habeenku waa la isku dhafan yahay, waxaana laga furfuri karaa sifooyinka udubdhexaadka, si aanad u soo dejinin oo ku rakibin iskudubaridyada.
Aragtida ugu weyn, sanduuqyada raadinta ayaa lagu daray, taas oo aan ka heli karno farsamooyinka ama qalabka si dhaqso badan; Tusaale ahaan: xisaabiyaha, qaabaynta, algorithmka wax soo saarka, waxay tilmaamaan lakabyada mashruuca, ama calaamadaha calaamadaha.
In daaqada guryaha ee lakabka, sanduuqa raadinta ayaa sidoo kale lagu daray, halka aad ka heli karto sifooyinka ama geeddi-socodka la xiriira lakabka. Tusaale ahaan, erayga waxaa lagu meeleeyaa mashiinka raadinta sifooyinka (1) muuqda muuqaalada guddiga iyo ka shaqeynayaan of lakabka, dhammaan kuwa amarradiisa ay ku jiraan erayga yeelaa (2), ka dibna hadii aan xusho mid ka mid ah, waxaad ka arki kartaa in mid ka mid ah doorasho ku jira erayga sifooyinka (3).
Marka fulinta kasta lakabka geedi socodka, sida sifooyinka shaandhaynta, ma jirin calaamad muujinaysa in tusinaysa in lakabka lahaa filter a. Meelahaas waxaa versions cusub, labadaba 3.4 sida in 3.6, ayaa lagu daray tilmaamayaasha habka ay u layers, sida ku cad image soo socda, si ay falanqeeye ka arki kartaa mid ka mid ah la sifeeyo, xidhmey ama lakabka nooca qalabka wax lagu miiro.
Xogta ugu dambeysa ee soo socota, sheyga kartoonada ayaa la soo saari karaa, taas oo muujinaysa astaamaha qofka isticmaalaya isbedelka ama daabacaadda. In menu ugu weyn; waxaa suurtagal ah in la abuuro asal tiro badan sida loo baahan yahay iyo mashaariicda mid kasta oo ka mid ah profiles ayaa lagu keydiyaa galka hoose ee Qgis 3. Waddada waa arrin sidan oo kale loogu talagalay dadka isticmaala Windows: C: \_ User \_\_ AppData \_ Roaming \_ QGIS \_ QGIS3 \_ profiles \_ default
Iyadoo laga hadlayo habka loo adeegsado vector ama raajo, qiyaasaha algorithms ayaa lagu daray, qaar kalena qaar ayaa loo hagaajiyay waayo-aragnimo wanaagsan
Markaad soo gasho shirkado aan ku jirin nidaam tixraac ah oo qeexaya, codsigu wuxuu codsanayaa inuu tilmaamo waxa meesha ku yaala xogtaas. Daaqad furan, meesha aad ka dooran karto nidaamyo kala duwan oo ka socda adduunka oo dhan, meesha ugu hooseysa, meesha ku yaal nidaamka la soo xulay ayaa lagu muujiyay, khariidad iyo waxaad xaqiijin kartaa haddii ay sax tahay, ka hor xogta iyo dhibaatooyinka goobta xiga ayaa la soo saaray.
Daabacaadda shirkadaha hadda waa mid aad u fudud, sida autocomplete si toos ah ama qaybo badan, si kastaba ha ahaatee, waa inaad weli u jeestaa oo ka baxa edebta, ugu yaraan 3.4 version. Qalabka waxaa lagu daray sida: jilicsanaanta shirkadaha, jimicsiga jirka, beddelidda jihada -harka tooska ah, ama dhaqdhaqaaqyada wareegyada mid ama dhamaan lakabyada. Wixii 3.6 Noosa version, suurtagalnimada in la socoto falanqaynta algorithms inta lagu jiro editing ayaa la filayaa, si looga fogaado abuurista cusub.
Qalabka wax lagu shaqeynayo, waxaa jira waxqabadyo lagu kala dooranayo qaybaha kala duwan ee ku xiran noocyada kala duwan ee astaamaha, sida: xulashada sifooyinka, xulashada bandhigga ama meesha. Horumarinta Qgis 3.6, waxay qeexeen nooc kale oo xulasho ah, oo lagu magacaabo xulasho qiime leh, oo la xidhiidha sifooyinka ay ku jiraan halbeega vector.
Mid ka mid ah codsiyada by users sameeyey, waxay ahayd hordhaca ah ee CADtools dhameystir in version 3.6 ah, waayo, mid ka mid ah qoraalkii ugu 3.X, waxaa la rabay, iyo rakibi Tababaraha ah iyadana ku tilmaamay in ay ahayd version ah oo duugoobay oo aan la dili laga yaabaa .
Calaamadeyntu waa qaab kale oo loo hagaajiyay hab kasta. Waa mid aad u fudud in la dhigo calaamad sahlan ama abuuraysa calaamad ku dhisan shirkado ku saleysan xeerarka. Doorashooyinkan ayaa lagu darayaa xayiraad, Tani waxay ka caawineysaa in wakhtigan xaadirka ah ee calaamadaha kale ee la sameeyay la abuuro, waxay faragelin karaan aragtida hay'adaha, lakabka lakabka leh.
Tilmaamo cusub ayaa la sameeyay oo lagu daray si loo helo calaamadaha la rabay si dhakhso ah, sida helitaanka - badhanka midig ee lakabka - qaababka shirkadaha. Qgis 3.6 Noosa, qaybaha sida muuqaalka qaababka ayaa lagu daray xml, ee guddi-hoosaadka ama xeerarka.
Sida geeddi-socodka la xiriira raajada, dhowr algorithms ayaa lagu darey si loo sameeyo habka soo saaridda iyo falanqaynta. Waxaa sii dhammaystira oo dhan muuqaalada hore, xisaabinta tirakoobka of raster ku salaysan xisaabinta mugga kale ee degaanka ah, dejinta M qiyamka, dejinta qiimaha Z sida ay geesaha of band kasta, ama soo saarida content dhexdhexaad ah - oo leh qaabka qaabka loogu talagalay beeraha midabtakoorka ah. Sidoo kale, qaabkan, qiimaha gaarka ah ee renderer iyo calaamadaha raajada ayaa lagu daray.
3D xogta, fursadaha cusub ayaa lagu darayaa sida shoogga dhulka, taas oo ah, falanqeeyuhu wuxuu awood u yeelanayaa inuu go'aan ka gaaro habka uu tusaaladiisa u matalayo. Intaa waxaa dheer, waxaad ku rakibi kartaa nalalka xayawaanka 3D, halka aad ku leedahay nalalka 8 taas oo ah jagada, xoojinta, midabka iyo isdifaaca.
Hagaagtay maamulka mashruuca, oo ay ku jiraan hawlaha sida dejinta fayl mashruuca, sida waxaa loo sameeyaa in ArcGIS Pro, tusaale ahaan, sidaas waxa lagu kaydin karaa hal meel ah geedi socodka iyo wax soo saarka mashruuca la xidhiidha oo dhan. Maaskarada Bilowga mashruuca, mashruuca bilawga ah ayaa la aasaasay, taas oo ah, waddada xogta laga baari karo
Muuqaal kale oo soo galey bogga waa suurtagal in la arko aragtiyo dhowr ah oo khariidada, oo ay ku jiraan kuwa ku jira xogta 3D. Laga soo bilaabo menu sare, aragtida aragtida, waxaa jira laba fursadood oo lagu daro aragtiyo, map map 2D (muuqaalka khariidadda cusub - ctrl + M) ama khariidadda cusub ee 3D. Ka dib markii ay doorteen nooca aragtida ah ee lagu dari karo, waxaa lagu dhigi karaa siyaabo kala duwan oo lagu dhejin karo aragtida guud, hal dhinac oo midig - midig - taas oo labadaba aragtiyo la dhigi karo ama la barbar dhigi karo aragti weyn.
Markaad dhigto kuwa wada nool, waxaad xaqiijin kartaa qaybo ka mid ah khariidada muhiimka ah ee aan lagu arki doonin wax soo saarka ugu dambeeya ee sheyga. Daaqad kasta oo cusub waxay si buuxda ugu xirantay dhismaha shabakadda, marka lagu daro in la isu dheellitiro ama aan la haynin xogta daaqada weyn, fiirinta xogta qiyaas gaar ah, muujinaysa hadalada, booska koollada ama calaamadaha.
Daabac ka kooban
Haddii aan dib ugu noqnoqonno, oo aan is dhex galno hawlgalka qalabkan hore, qof kastaa wuxuu isku raacsan yahay in uu ahaa mid aad u adag oo qallafsan; ilaa ay gaareen dhibciga meesha xogta la xareeyay laga soo saaray oo waxay doonayeen inay isticmaalaan barnaamijyo kale si loo soo saaro badeecadda kama dambaysta ah. Noocyada ugu dambeeya ee noocan ah, korontada ayaa la hagaajiyay gudaha, waxayna sidoo kale oggolaatay daabacaadda 3D. Falanqeeyuhu wuxuu abuuri karaa hal ama dhowr nooc oo aragtid isku mid ah, marka lagu daro inuu awoodo inuu ku daro boggiisa.
Ku darida dhammaan kor ku xusan, sifooyin badan ayaa lagu daray, iyo suurtogalnimada in lagu soo bandhigo noocyada kale ee xog sida sida: Taageero loogu talagalay 3D Mesh - iyo wax kasta oo ku lug leh maaraynta xogtan, sida aqoonsashada waxyaabaha-.
Baakadaha iyo sawirrada geotagged
Gudaha Qgis, isticmaalka iyo baakadaha, si ay u haystaan ​​baakadaha lakabyada gudaha qalabka wax lagu shaqeeyo - waxay u egtahay mid aad u caan ah sida aan ku sameeyay ArcGIS Pro-.
Waxaa kale oo la filayaa in qalabka kale ee loo isticmaali karo in 3.4 lagu sii wado in lagu daro, kuwaas oo lagu magacaabi karo: soo dajinta sawirada geotagged-ku xiran qalabka wax lagu shaqeeyo-. Iyada oo qalabkan lakabka ah ayaa la abuuray, halkaas oo goobaha geo-tagged ama sawirrada geolocated ay ku yaalaan. Sawiradu waxay leeyihiin waa qaab JPEG ah, iyo buugga guud oo dhan ayaa lagu galaa nidaamka, sidaas darteed abuuraya alaab mug leh oo leh sifooyin sare.
Wararka kale Qgis 3.6
Marka laga soo tago dhammaan qodobbada, sifooyinka soo socda, farsamooyinka iyo ku darsamayaasha waxaa lagu daraa, kuwaas oo lagu daro qaab aan la barbardhigi karin noocyada 2X, ee ku wajahan qaabkan:
Maamulaha ilaha xogta wuxuu taageersan yahay abuurista lakabyo muuqaal ah, macluumaadka nooca mesh - macluumaadka mesh, iyo juqraafi -
Jaaliyada dadka isticmaala iyo kuwa horumariya, waxay faallo ka bixiyeen isticmaalka luqadda C ++, dib-u-dhiska ama hagaajinta algorithms horay u jiray.
Suurtagalnimada in la abuuro qaybo, kooxayn iyo isu-ururin waa xaqiiqo. Waxay sidoo kale fududeeyeen hawlwadeennada, shaqooyinka isbeddelka kuwaas oo gacan ka geysanaya in la dhiso kalmadaha si sahlan.
Nidaamyada ama hawlaha waxaa lagu fuliyaa asalka, si aysan u faragalin waxqabadyo kale.
Dad badan -oo naga mid ah- Waxaan su'aalo ka waydiinnay shirarka ku saabsan sifooyin gaar ah, qalab ama waxqabadka Qgis, sababtoo ah la'aanta dokumentiyo badan oo ka mid ah arrimahan. Nidaamkaan cusub, kooxda horumarinta ayaa muujisay inay jiraan dukumentiyo wanaagsan oo ku saabsan geeddi-socodka iyo qalabyada ka kooban GIS.
Mid ka mid ah waxqabadka yar ee la yiraahdo, laakiin waxaan rajeyneynaa inaan caddeyno, waa wakhti go'an, oo la xidhiidha daraasado badan oo munaasab ah.
Dardargelinta dhejiska ee mashiinka raajada.
JSON taageerada baakooyinka geo
"QGIS waa barnaamij bilaash ah adigana maaha inaad bixiso wax kasta oo aad isticmaasho. Dhab ahaantii, waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelinno dadka adduunka ku nool inay isticmaalaan, iyadoon loo eegin xaalada dhaqaale ama bulshadeed. Waxaan aaminsanahay in tababarka dadka leh qalab go aansado go'aan qaadasho ay dhalin doonto bulsho ka fiican dhammaan bani'aadamnimada. "
Sida falanqeeyayaasha iyo xiisaha leh aagga "Nidaamka Macluumaadka Juqraafi, qalab falanqaynta farsamada, ee ku jira 3.6 Noosa version, waxay ku siin kartaa faa'iido badan dhismaha alaabta. On bogga rasmiga ah ee Qgis, waa qaababka lagu sifeeyey maqaalkan. Farqiga u dhaxeeya mid kasta waa in 3.4 Madeira uu yahay mid sii dheereynaysa, iyadoo la xakameynayo boogaha inta lagu jiro isticmaalka. Dhinaca kale, version 3.6 Noosa waa mid ka mid ah tayada rikoodhka ah ee dadka ku takhasusay, laakiin leh caqabado la fahmi karo, waxaana la soo bandhigi karaa cayayaanka inta lagu jiro isticmaalka.
Post Previous«Previous #BIM - Koorso Naqshadeynta Qaab dhismeedka iyadoo la adeegsanayo Qaabdhismeedka Robotka AutoDesk
Post Next Adeegga shabakada khariidadaha hore ee ka mid ah kuwa ugu caansan ee Mapping Volume 28-124Next »